トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada dooneysa model yar ee tii pachinko
Xitaa qowladda pachinko in tag oo idinka mid ah, waxaan u malaynayaa in ay jiraan had iyo jeer waa mid aad u wanaagsan ma model yar hawlgalka. Gaar ahaan, ama in la geliyey dhinaca dukaanka dhabarka, tirada waa lagu daydo aad u yar oo si yahay. Sida macaamiisha, dhanka kalana laakiin yar waa model ah, laakiin waxaa jira ee khasaaraha dabcan sidoo kale, waxaa kale oo jira faa'iidooyin. Sidaas, marka la eego lagu beegsanayo model yar, faa'iidooyinka iyo khasaaraha, waxaan eegi doonaa wixii ay u.
First sida khasaaro ah, maxaa yeelay macluumaad model waa ka yar, waa in wax soo saarka sida hana eeg dhab dhuftay lama yaqaan. Intaa waxaa dheer, howlgalka waa lagama yaabo inay wada ah itimaalka for yar yahay, waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la qiimeeyo la ruxruxo ee ROM.
daydo yar, la taaban karo ama aan loo jecel yahay, tirada lagu daydo hore ka gudbeen waqti ka iibiyo. Ujeedada in, waxaan u qaabeeyaan macluumaadka sida wax soo saarka ama taagan macluumaadka dheelitirka uu noqdo mid aad u yar. In hadlaya sida ay u ururiyaan wararka samaynaya, waxaa lagu lumin doonaa xaqiijin oo kaliya dhab naftaada ku dhuftay.
kaliya ku dhuftay in yar oo ah, sababta oo ah ma aad u badan og, waxaad u baahan doontaa xal of degree qaar ka mid ah maalgelinta. maalgashiga hore ee macluumaadka la ururiyey, waa xaqiiqda ah in waa in la tixgeliyaa. Intaa waxaa dheer, had iyo gobolka meesha ay ka jirto orodka ma waxa lagu gartaa model yar. Xaqiiqada ah in hawlgalka ma aha, halkii hirarka wanaagsan iyo hirarka xun ayay u badan tahay inay boosas, waqtiga hirarka xun, wakhti qaadan doonto in ay wada kulmaan ilaa Ghanna itimaalka.
in ay qabsadaan model yar, haddii la kordhiyo jaaniska ah ku guuleystay, maalgashiga iyo hawsha ururinta macluumaadka, sidoo kale waxaad u baahan doontaa aqoonta inuu wax akhriyo hirarka.
In ay tahay lacagta si ay lid ku ah, qaliinka sidaas tahay iyo in ay u egtahay in ay ku dhuftay madal aan loogu talagalay, sababtoo ah qofka kale arrin aan ku dhuftay, haddii qof maal karaa in qaar ka mid ah xadka is-maalgelinta, akhriska mowjado per waa in si sahlan. Had iyo jeer waxaa socda lagu daydo yar daciif ah, sare u jaaniska in ay cayaarta lagu sameeyo si qallafsan.
kiiska, sida aad qaadato xogta in ay diiradda saaraan hal a, maxaa yeelay waxa ay sidoo kale waa aan wax badan in ay ku dhuftay qof kale, halkii Hirarka iyo mawqifkii mar wada oo ka mid ah ayaa noqonaya mid fudud si ay u arkaan dhex. Imanayay oo ku dhuftay in muddada this badan guud ahaan, sida jaaniska waa heer sare ah, xaqiiqada ah in muddada per si fudud loo akhriyo, aad faa'iidada ugu badan.
Sidoo kale, lagu daydo yaryar sida, sidoo kale jiri doona waxyaalo badan oo loo isticmaalo model dhacdo. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo xaalado badan oo kaliya la kordhiyo hawlgalka, fadlan fiiri musmaarrada. Inta badan ee la soo dhaafay hal todobaad xogta, haddii ay jiraan waa hab lagu garanaya macluumaad heshay ee, ma waxaa u roon in si aad u hubiso.